Amanzimtoti Izindawo Eziqashwayo Zeholide & Amakhaya - KwaZulu-Natal, iNingizimu Afrika | Airbnb
Ukuqasha kokuvakasha e-Amanzimtoti
Izindawo eziqashwayo zeholide ezinconywa kakhulu e- Amanzimtoti
* Asithintwanga yizikhukhula zakamuva. Amanzi ethu ahlanzekile futhi ayaphuza.* Lokhu egqamile, yesimanje, zezimboni styled engadini Cottage inikeza indawo ephelele ikhefu kude umsindo kanye bustle. Ukuhambahamba ngemizuzu engu-10 noma ukuhamba ngemizuzu engu-2 kuzokuyisa ebhishi lokubhukuda nasezitolo zokudla eziseduze, uthathe imizila nezindawo zokudlela. Kuqhele ngemizuzu engu-25 edolobheni laseThekwini, le ndawo ethulile yenza kube neholide elihle noma ukuhlala kwebhizinisi. Sicela uqaphele: Asiwavumeli amaphathi asendlini.
Amasevisi athandwayo ase- Amanzimtoti ezindawo eziqashwayo zeholide
Ezinye izindawo ezinhle eziqashwayo zeholide e- Amanzimtoti